Izindaba - Ingxenye yokuqala yokuqeqeshwa kwezokwelapha eSanxin
Ngonyaka okhethekile “wobhubhane”, saqala saqasha i- “Xinhuo” ngeplathi yesikhulumi futhi safika nomndeni wakwaSanxin ngoJuni 28. Ithalente liyisisekelo sebhizinisi. UNobhala-Jikelele u-Xi usegcizelele kaninginingi ukuthi amathalente ayizinsizakusebenza zamasu wokuvuselela ukuvuselelwa kukazwelonke nokunqoba lesi sinyathelo emncintiswaneni wamazwe ngamazwe. KwaSanxin, amathalenta afanele iSanxin angumthombo wokwakha isisekelo seminyaka eyikhulu nesisekelo sebhizinisi ukuze lihlale lingenakunqotshwa.
Inkinobho yempilo kufanele iboshwe kusukela ekuqaleni. Uma inkinobho yokuqala ingalungile, konke okunye kuzobe kungalungile. Esigabeni sesithupha “secebo leXinhuo” lakwaSanxin, inkampani isungule uhlelo lokuqeqeshwa oluningiliziwe, olufakelwe ubuhlakani kusukela osukwini lokuqala lokuqashwa. Kusukela ekuqeqeshweni okubophezele ngaphandle kuya ekubambisaneni kwethimba, kusuka ekushintsheni kwendima kuya ekuhleleni umsebenzi, kusuka kumasiko ezinkampani kuya ekuphatheni nasekulawuleni uhlelo, kusuka endabeni yeSanxin kuya esikhathini esizayo seSanxin, kusuka kubaphathi benkampani kuya kwizikhulu zebhizinisi, abafundisi bethu bonke bazi konke, futhi i- "Xinhuo" yethu ezinikele futhi angakhathali.
Njengoba isisho esidala sithi, "ubaba uzelwe, uthisha uyafundisa.". “Uthisha” akagcini ngokudlulisa ulwazi namakhono, kepha futhi ukufaka umuzwa oqotho wokukhathazeka nokufundisa kwabazali. Engxenyeni yokuqala, sibe nomcimbi omkhulu wokukhulekelwa kothisha, ongewona nje umkhosi, kodwa futhi oyisinyathelo esibalulekile emsebenzini wekusasa likaGuan Peisheng. Njengoba isisho sithi, "ukulalela amazwi akho kungcono kunokufunda iminyaka eyishumi". Umfundisi uzoba umhlahlandlela wethu wokuvula indawo yokusebenza.
Ukuqeqeshwa kwezifundo zebhizinisi
▲ Abanye abafundisi
“Kusephepheni kuphela lapho uzozizwa ungajulile khona ekupheleni kosuku, futhi kuyomelwe ukuprakthize.” I-Sanxin isabele ngenkuthalo futhi yasungula ngokuphelele ukwakhiwa kwebutho elikhulu labasebenzi abanolwazi, abanamakhono nabasungula izinto ezintsha, baqhubekisela phambili umoya wabasebenzi abayimodeli nengcweti, futhi bakha imfashini yezenhlalo yabasebenzi abakhazimulayo kanye nomoya wobungcweti wokulwela ukuphelela . Esikufundile akumele kuhlale ezincwadini noma emakhanda ethu, kepha kufanele kusetshenziswe ngokusebenza futhi kwazise ukudalwa. Kufanele sizuze ubunye bolwazi nokwenza, sifunde ulwazi lweqiniso futhi siqonde incazelo yangempela ekusebenzeni, sikhuthaze isenzo ngolwazi futhi sifune ulwazi ngokwenza.
“Yize umgwaqo useduze, asikwazi ukukwenza; noma ngabe le ndaba incane, akunakwenzeka. ” Wonke amabhizinisi, amakhulu noma amancane, enziwa phansi naphansi kancane kancane. Kufanele sisebenze kanzima futhi senze izinto ngokweqile, sisebenze kanzima futhi sisebenze kanzima. IXinhuo ibasa umlilo wasenkangala, onganqandeki. Abantu baseSanxin kufanele baqine emibonweni nasezinkolelweni zabo, babe nezifiso eziphakeme, babe phansi, futhi babe ngabahleli bezikhathi. Kumkhuba ogqamile wokufeza iphupho likaSanxin leminyaka eyikhulu, kufanele badedele amaphupho abo obusha, futhi benze imizamo engapheli yokuzibhalela izahluko ezimibalabala zokuphila ekuthuthukiseni impilo yabantu!